Ahoana no Hitaizana ny Ankizy? | Fianakaviana Sambatra
HAMAKY AMIN'NY TENY Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Akha Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Arabo (Maroc) Arabo (Tonizia) Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Ateso Aukan Awajun Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baliney Bambara Baoulé Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Bomu Boulou Bété Cakchiquel Afovoany Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Digor Diola Douala Drehu Dusun Efik Emberá (Catío) Esan Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gitonga Goujrati Goun Gourmanchéma Grika Groenlandey Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guna Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Huaxtèque (San Luis Potosi) Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabarde-Tcherkesse Kabiyè Kabuverdianu Kabyle Kachin Kalanga (Zimbabwe) Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kaomaorianina (Ngazidja) Karen (S'gaw) Kariba Kazakh Kekchi Khana Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kpelle Kreola any Martinika Kreôla Maorisianina Kreôla any Belize Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kurde Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Madura Makoshi Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mandjak Manipuri Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mayo Mazahua Mazateky (Huautla) Mbukushu Mende Meru Mingrelian Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mixtèque (Huajuapan) Mizo Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Nambya Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngabere Ngangela Nhengatu Nias Niue Norvezianina Nsenga (Mozambika) Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Arabo) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Poméranien Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Pular Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Quiché Rapa Nui Rarotonga Romanianina Rosianina Rumanyo Runyankore Rutoro Rômania (Boligaria) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Romania) Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sateré-Mawé Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Serer Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Shuar Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Afovoany Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Vietnamianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Touva Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Udmurt Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Xârâcùù Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
“Aoka ho ao am-ponao ireto teny andidiako anao anio ireto. Dia alenteho tsikelikely ao an-tsain’ny zanakao izany.”—Deoteronomia 6:6, 7
Nankinin’i Jehovah tamin’ny ray aman-dreny ny fikarakarana ny zanaka, tamin’izy namorona ny fianakaviana. (Kolosianina 3:20) Andraikitrao ny mampianatra ny zanakao mba ho tia an’i Jehovah sy ho lasa olon-dehibe matotra. (2 Timoty 1:5; 3:15) Mila mamantatra an’izay ao am-pony koa ianao, ary miezaka ho modely. Tsy tena ho afaka hampianatra ny zanakao ny Tenin’i Jehovah ianao, raha tsy ianao mihitsy aloha no mandrakitra an’izany ao am-ponao.—Salamo 40:8.
1 MIEZAHA HO MORA IRESAHANA
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Aoka ianao “ho mailaka hihaino” sy “tsy ho maika hiteny.” (Jakoba 1:19) Ataovy izay hahatsapan’ny zanakao fa afaka miresaka malalaka aminao izy. Tokony ho tsapany fa vonona hihaino azy foana ianao rehefa te hiresaka izy. Ataovy izay hampihavana tsara anareo mianakavy, dia ho mora amin’ny ankizy ny hilaza ny heviny. (Jakoba 3:18) Mety tsy hilaza izay tena ao am-pony izy, raha matahotra hoe hasiaka ianao na hanakiana azy. Manàna faharetana amin’ny zanakao ary omeo toky matetika izy hoe tianao.—Matio 3:17; 1 Korintianina 8:1.
Aoka ianao ho vonona hihaino rehefa te hiresaka ny zanakao
Miresaha foana amin’ny zanakao, fa aza miandry hoe efa misy olana vao hiresaka
2 FANTARO IZAY TENA TIANY HOLAZAINA
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Toy ny rano lalina ny hevitra ao am-pon’ny olona, fa izay manana fahaiza-manavaka kosa mahay manovo azy ihany.” (Ohabolana 20:5) Raha te hahalala izay tena ao am-pon’ny zanakao ianao, dia ilainao indraindray ny mandinika kokoa rehefa miteny izy. Manitatra ny tanora matetika, na milaza zavatra tsy tena avy ao am-pony. “Izay mamaly nefa mbola tsy nihaino akory, dia hadalana sy henatra ho azy izany.” (Ohabolana 18:13) Aza mora tezitra.—Ohabolana 19:11.
Aoka ianao ho tapa-kevitra ny tsy hitroatra na hanapaka ny tenin-janakao, na inona na inona lazainy
Miezaha hitadidy hoe inona no tsapanao tamin’ianao nitovy taona taminy ary inona no noheverinao ho zava-dehibe
3 ASEHOY FA MIRAY SAINA IANAREO MIVADY
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Henoy, anaka, ny anatry ny rainao, ary aza atao tsinontsinona ny lalàn-dreninao.” (Ohabolana 1:8) Samy nomen’i Jehovah fahefana amin’ny zanany ny ray sy ny reny. Tsy maintsy ampianarinareo hanaja sy hankatò anareo ny zanakareo. (Efesianina 6:1-3) Tsapan’ny ankizy rehefa tsy ‘miray saina’ tsara ny ray aman-dreniny. (1 Korintianina 1:10) Mety tsy hiray hevitra ianareo, nefa tsara raha tsy asehonareo ny zanakareo izany. Mety hahatonga azy tsy hanaja anareo mantsy izany.
Iaraho midinika hoe ahoana no hifehezana ny ankizy, ary mifanaraha tsara
Miezaha hahatakatra ny fomba fihevitry ny vadinao, raha tsy mitovy hevitra ianareo eo amin’ny fomba fitaizana
4 ERITRERETO MIALOHA NY FOMBA HITAIZANA NY ZANAKAREO
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza.” (Ohabolana 22:6) Tsy voatery hahatonga ny ankizy ho tsara taiza izay fomba hitaizanao azy. Mila dinihina mialoha ny fomba fitaizana, anisan’izany ny fomba hifehezana ny ankizy. (Salamo 127:4; Ohabolana 29:17) Tsy midika fotsiny hoe manasazy ny hoe mifehy, fa midika koa hoe manampy ny ankizy hahazo ny anton’ny fitsipika omena azy. (Ohabolana 28:7) Ampianaro izy ho tia ny Tenin’i Jehovah sy hamantatra ny toro lalana ao. (Salamo 1:2) Ho voaofana tsara ny feon’ny fieritreretany amin’izay.—Hebreo 5:14.
Ampio ny zanakao hino fa tena misy Andriamanitra ary azo itokisana
Ampio izy hamantatra sy hanalavitra izay mety hahatonga azy hanao ratsy, anisan’izany ny zavatra mampidi-doza ao amin’ny Internet sy ny tranonkala fifaneraserana. Atoroy azy koa izay azo atao mba tsy hisy hametaveta
“Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza”
HITAHY NY EZAKA ATAONAO I JEHOVAH
Manana andraikitra manokana ianareo ray aman-dreny, dia ny hampianatra ny zanakareo ny fomba fisainan’i Jehovah. (Efesianina 6:4) Fantatr’i Jehovah fa ilana ezaka be izany. Matokia anefa fa hitondra dera ho an’Andriamanitra sy fifaliana lehibe ho anao ny zanakao, raha tsara taiza.—Ohabolana 23:24.
Inona no azoko atao mba ho sahy hiresaka ny zava-drehetra amiko ny zanako?
Inona no azoko ianarana avy amin’ny fomba fitaizan’ny hafa?
Ho An’ny Ankizy
Raha te hampianatra ny zanakao ho tsara toetra ianao dia ampiasao ireo fitaovana mahafinaritra ato, izay miorina amin’ny Baiboly.
Misy fomba telo tena mandaitra azonao ananarana ny zanakao, ao amin’ny Baiboly.
Misy toro lalana ara-baiboly maro azo ampiharina ato hanampy anao hiresaka amin’ny zanakao momba ny firaisana ary hiaro azy ireo amin’ny mpametaveta.
Mitaiza Irery: Ampio Izy Hanana Fitondran-tena Tsara
Inona no toro lalan’ny Baiboly hanampy anao hampianatra ny zanakao hanana fitondran-tena tsara?
Hizara Hizara Ahoana no Hitaizana ny Ankizy?
hf fizarana 7 p. 22-25
Soratra Fandikana boky Tianao ho Sambatra ve ny Fianakavianao?
Raki-peo Fandikana raki-peo Tianao ho Sambatra ve ny Fianakavianao?
Hizara Hizara Tianao ho Sambatra ve ny Fianakavianao?